DHEGEYSO-Maamulka degmada Marka oo xaqiijiyey in Alshabaab magaalada Qabsadeen. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Maamulka degmada Marka oo xaqiijiyey in Alshabaab magaalada Qabsadeen.
Luulyo 11, 2016 11:39 b 0
(July 11 2016)-Wararka ka imaanaya Magaalada Marko ee Xarunta Gobolka Shabeelaha Hoose waxay sheegayaan in Magaaladaasi ay ka baxeen Ciidamadii Meleteriga ee ku sugnaa, iyadoona Magaalada ay gudaha ugaleen Dagaalamayaal katirsan Alshabaab.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in alshabaab magaalada ay kasoo galeen Dhanka Koontoroolka wayn isla markaana aysan jirin wax iska caabin ah oo ay la kulmeen.
Hadaba sida ay wax udhaceen iyo Xaaladda Magaalada Waxaa Radio Daljir uga waramay Gudoomiyaha Degmada Marko Xuseen Cumar. Waxaana uu uwaramay Cumar Laki Man oo ku sugan Studiyaha Daljir ee Caabudwaaq.
DHEGEYSO-Warkii Fiidnimo Xarunta Daljir ee Boosaaso 11 07 2016.
DHEGEYSO-Faahfaahinta weerarkii Alshabaab ku qaadeen deegaanka Laanta-buuro.